आफ्नै हातले प्लास्टिक बोतल देखि एक डेजी कसरी बनाउने?
झन्, म यो प्रश्न सोध्छन्: "कसरी गर्न ? आफ्नै हातले प्लास्टिक बोतल देखि डेजी" यो यस्तो सजावट सजिलो बनाइएको भन्ने तथ्यलाई कारण छ। र त्यहाँ सबै आवश्यक घटक हात मा सधैं छौं। त्यहाँ यस्तो शिल्प सिर्जना विभिन्न तरिकाहरू छन्। यस लेखमा दुई भन्दा सरल छन्, शुरुआती मालिकको लागि सबै भन्दा राम्रो उपयुक्त छन्।
पहिले कसरी प्लास्टिक बोतल देखि chamomile बनाउन, यसलाई आवश्यक प्रक्रिया आवश्यक छन् भनेर माल र उपकरण तयार गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले हात हुनुपर्छ, यो गुणस्तर को उच्चतम स्तर संग निकटतम समयमा सबै कार्यान्वयन हुनेछ। सामाग्री बीच तपाईं निम्न ध्यान गर्न आवश्यक छ:
फूल (उपयुक्त कन्टेनर दूध, kefir, दही वा अमिलो दूध संग) को लागि डेयरी उत्पादन अन्तर्गत देखि प्लास्टिक कन्टेनर। यो एक पहेलो आवरण छ, तर यो महत्वपूर्ण छैन भने यो राम्रो हुनेछ। तपाईं पनि अन्य रंग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो मामला मा तपाईं सफेद रंग आवश्यक हुनेछ।
हरियो कन्टेनर पत्रदल। फेरि - तपाईं दुवै डिजाइन, तर त्यसपछि आवश्यक रंग गर्न आवश्यक सक्नुहुन्छ।
एक मोटी (5-8 मिमी 2) र पातलो (12मिमी) तार।
केही अवस्थामा, तपाईं नङ पालिस पहेंलो हुन सक्छ।
Adhesive टेप वा इन्सुलेट टेप।
PVA प्रकार गोंद।
बारी मा, उपकरण तयार गर्न आवश्यकता:
मेल खाने वा हल्का।
यसलाई आफ्नो औँलामा सबै त्यहाँ भने, तपाईं कसरी घर मा प्लास्टिक बोतल को डेजी बनाउन सामना गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
एक सरल समाधान
यस मामला मा, हामी एक सानो क्षमता (0.5 लिटर पूर्ण फिट) एक ठूलो ढक्कन संग आवश्यक छ। शीर्ष 5-7 सेन्टीमिटरको दूरी मा यो कटौती। आवरण स्टेम विधानसभा लागि प्वाल बनाउँछ र यसलाई सेट गर्नुहोस्। पातहरु को किनाराको साथ इच्छित आकार कटौती। तिनीहरूलाई Unbend। ढक्कन पहेंलो छैन भने, यो नङ वार्निश वा तेल ढाक्न आवश्यक छ
पहेंलो रंग र सुक्खा गर्न अनुमति दिन्छ। यो स्टेम हरियो shrinking र गरम धारण छ। अर्को, पातहरु उत्पादित गर्दै छन्। तिनीहरूले हरियो बियर कन्टेनर काट्न छन्। पातलो तार को स्टेम संलग्न छन्। यो सबैभन्दा सरल र कसरी प्लास्टिक बोतल बाहिर एक डेजी सिर्जना गर्न को सबै भन्दा साधारण डिजाइन छ। यो प्रदर्शन को फोटो अक्सर बुनाइ मा पत्रिका मा पाइन्छ।
थप परिष्कृत विकल्पहरू
दोस्रो मामला मा एक समान कार्य, तर सिर्जना अल्गोरिदम को फूल अलिकति थप जटिल छ। पहिलो मामला मा, हामी यहाँ यो आवश्यक छ, बोतल को आकार उत्पादन शिल्प र यो आधारमा भरोसा। लिन कुनै पनि कन्टेनर र दुई सर्कल कटौती - यो कोर छ। ती मध्ये स्टेम संलग्न लागि प्वाल बनाउन र राम्रो तार र गोंद संग यसलाई ठीक। पहेंलो रंग तिनीहरूलाई कवर, शुष्क दिनुहोस्। त्यसपछि आफूलाई पत्रदल कटौती र सर्कल को तल तिनीहरूलाई गोंद। त्यसपछि दोस्रो राउन्ड को शीर्ष तिनीहरूलाई गोंद। पत्रदल स्टेम रूपमा, पहिले वर्णन विधि द्वारा बनाईएको हो। यसरी यो प्लास्टिक बोतल को ठूलो डेजी गर्न सकिन्छ। यो गर्न, हामी5लिटर र थप क्षमता संग ठूलो प्लास्टिक कन्टेनर प्रयोग गर्न मात्र आवश्यक छ।
यो सामाग्री प्लास्टिक बोतल को डेजी कसरी बनाउने दुई तरिकामा देखाउँछ। तिनीहरूलाई को एक यो साईट मास्टर लागि थप उपयुक्त छ थप सरल छ र बोतल को बाह्य आकार मा आधारित छ। र दोस्रो - एक सानो थप जटिल छ, तर तपाईंलाई अनुमति दिन्छ समाधान को एक किसिम प्राप्त गर्न। यो यस्तो सौन्दर्य बढी अनुभवी निर्माताहरू लागि राम्रो हुनेछ।
5 spokes मा बुनाई मोजा को योजना: शुरुआती को लागि एक मास्टर वर्ग
मोती देखि फूल: मूल सजावट!
Craquelure प्रविधी: डिकोउपेज चाहनुहुन्छ गर्ने र मात्र ती लागि मास्टर वर्ग
मोती को बुनाई फूल ड्राइभिङ: मूल लटकन
Ppopulyarnoy खेलको बारेमा समाचार। वर्ण रचना "यस Sims 3"
को छिनो के हो र के यो संग गर्न सकिन्छ?
मञ्चमा विरोधी-पर्ची पैड। प्रोफाइल विरोधी-पर्ची रबर
Trimmer BaByliss E835E। यस पुरुष ग्याजेटको समीक्षा
मस्तिष्क गतिविधि को उत्तेजक - तथ्य वा मिथ्या?
मैकेरल पन्नी मा सुखा। भाँडा विभिन्न संस्करणहरू
अज्ञात उपकरणको लागि चालक कसरी पाउन? विभिन्न अपरेटिङ सिस्टम लागि चालक फेला पार्न तरिका
Scorpio महिला लागि ढुङ्गा कस्तो हुनुपर्छ?
विगत र वर्तमान: लागि sausages प्राकृतिक casings
धेरै बच्चा र वयस्कहरू राजकुमारीहरू कसरी आकर्षित गर्ने भनेर सपना देख्छन्
अफ्रीकी पैटर्न, गहने र रूपाणहरु।
विश्व मैट्रोलोजी दिन: छुट्टी को इतिहास